News Collection: सुन्दर मोडेल देख्दा जसलाई तनाब हुन्छ
सुन्दर मोडेल देख्दा जसलाई तनाब हुन्छ
राजभाइ सुवाल ग्ल्यामर फोटोग्राफर
सुन्दर र सेक्सी मोडेललाई रिलमा उतारिरहँदा ग्ल्यामर फोटोग्राफर राजभाइ सुवालका मनमा के-कस्ता भावना आउँछन् होला ? उनी भन्छन्, 'मलाई त तनाब हुन्छ　। म कुनै पात्रको जुन किसिमको आकर्षण र सुन्दरता आँखाले देख्छु, त्यसलाई क्यामेरामा उतार्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर तनाबग्रस्त हुन्छु　।'
नेपालका नाम चलेका ग्ल्यामर फोटोग्राफरहरूमा राजभाइ सुवाल पनि पर्छन्　। ०४१ सालमा पहिलोपटक क्यामेरा समाएका उनले त्यसको सात वर्षपछि ग्ल्यामर फोटोग्राफी सुरु गरे　। अहिले उनको आफ्नै घरमा आफ्नै स्टुडियो छ　। यसलाई नेपालको सबभन्दा भव्य स्टुडियो मानिन्छ　। 'मैले युरोपका विभिन्न देश घुमेर, त्यहाँका स्टुडियो हेरेर यो स्टुडियो बनाएको हुँ,' उनी भन्छन्　।
आफूलाई सबभन्दा पहिले फोटोग्राफर हुँ भन्न रुचाउँछन्, उनी　। 'र, त्यसपछि मात्रै ग्लामर फोटोग्राफर हुँ　। र, एड फोटोग्राफर पनि हुँ,' उनी भन्छन्　।
आउटडोर र इनडोरमध्ये उनलाई इन्डोर फोटोग्राफी राम्रो लाग्छ　। 'किनभने यसमा हरेक कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा हुन्छ　। आउटडोरमा केही असुविधा हुन्छन्　। जस्तो, समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ,' उनी भन्छन्　।
सेक्सी (सुन्दर र आकर्षक) मोडेललाई रिलमा उतारिरहँदा उनका मनमा के-कस्ता भावना आउँछन् होला ? यो मेरो काम हो या व्यवसाय हो भन्ने भावबाहेक　। 'मलाई त तनाब हुन्छ,' हामीलाई चकित पार्नेगरी उनी भन्छन्, 'म कुनै पात्रको जुन किसिमको आकर्षण र सुन्दरता आँखाले देख्छु, त्यसलाई क्यामेरामा उतार्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने तनाबग्रस्त हुन्छु　।' उनको यही 'तनाब' का कारण धेरै सुन्दर फोटा खिचिएका छन्　।
भारतमा ग्ल्यामर फोटोग्राफरले धेरै चान्स मार्छन् अर्थात् मौकाको फाइदा उठाउँछन् भनिन्छ　। त्यहाँ मोडेलहरूको विभिन्नखाले शोषण गरिएको कुरा बाहिर आउँछन्　। नेपालमा चाहिँ स्थिति के छ नि ? 'हरेक पेसामा चान्स मार्न खोज्ने मान्छे हुन्छन्,' राजभाइ भन्छन्, 'नर्सकेा शोषण गर्न खोज्ने डाक्टर होलान्, एअर होस्टेजको फाइदा उठाउन खोज्ने पाइलट होलान्　। आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई हेप्ने या उसबाट नाजायज फाइदा उठाउन खोज्ने हाकिम होलान्　। त्यसैले यो व्यक्तिको नेचर-प्रकृति)मा भरपर्ने कुरा हो　। जहाँसम्म मेरो सवाल छ, मैले त्यस्तो नाजायज फाइदा उठाएको छैन　।'
पोज मिलाउन मोडेलको शरीरमा छुनुपर्ला, कपडा मिलाइदिनुपर्ला　। त्यतिखेर उनलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन ? 'के-को अप्ठ्यारो नि !' उनी भन्छन्, 'कामै त्यस्तो भएपछि　। कसैको शरीरमा बद्नियतले छोए पो अप्ठ्यारो लाग्नु !' अनि, विपरीत लिंगीप्रतिको स्वाभाविक आकर्षण त हुन्छ होला नि ? 'त्यो त भइहाल्छ नि ! तर, त्यो अपराध होइन,' उनी भन्छन्　।
फोटोग्राफरले सोचेको कुरा क्यामेराको माध्यमबाट रंग र प्रकाशको व्यवस्थापन गरी सिर्जना गर्नु फोटोग्राफी हो भन्छन्, राजभाइ　। ०४१ सालदेखि फोटोग्राफी सुरु गरेका हुन्, उनले　। 'विवाह, पार्टीमा पनि फोटो खिचे　। फिल्मको छायांकन पनि गरेँ,' उनी बताउँछन्, 'अरू विषयमा पनि फोटोग्राफी गरेको छु　।' उनको अनुभव छ- अनुभवी मान्छे क्यामेरापछाडि भयो भने फोटो राम्रो हुन्छ　।
अचेल नेपाली फोटोग्राफरको संसार निकै ठूलो भइसकेको छ　। 'यहाँ सीप भएका र नभएका दुवैथरी छन्,' राजभाइ भन्छन्, 'डिजिटल प्रविधिका कारण पनि धेरैजना यस क्षेत्रमा आएका होलान्　।'
कसैलाई स्टार बनाउन ग्ल्यामर फोटोग्राफरको कति भूमिका हुन्छ होला ?
'९० प्रतिशत,' उनले प्रतिशतै तोकेर भन्दिन्छन्, 'मोडेलिङ या एक्टिङमा अभिरुचि भएकाहरूको निर्देशक, निर्मातासँग सीधा सम्पर्क हुँदैन　। उसलाई बजारमा ल्याउने ग्ल्यामर फोटोग्राफरले हो　। एकप्रकारले ग्ल्यामर फोटोग्राफर नयाँ कलाकार तथा मोडेलका लागि निर्माता/निर्देशकसम्म पुग्ने पुल बन्छ　।'
रातोदिन मोडेलसँग बसउठ गर्ने राजभाइका अनुसार मोडेल हुन हाइट र फिगर मात्रै भएर पुग्दैन　। 'मुख्य कुरा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ　। पेसाप्रति इमानदार, समयको ख्याल गर्ने (पंकच्युअल), अभिनय क्षमता भएको हुनुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'मोडेलिङ कुनै पनि हालतमा शरीर प्रदर्शन मात्रै होइन, यो मूलतः एक विशेष भाव या उद्देश्यको अभिव्यक्ति हो　। र, हो एक विशिष्ट कला　।'
नेताहरूबाहेक सबै चर्चित मोडेल, नायक/नायिकालाई उनले आफ्नो क्यामेरामा उतारिसकेका छन्　। उनले क्यामेरा किन्नमा थुप्रै खर्च गरेका छन्　। '४०/५० लाख रुपैयाँजतिको क्यामेरा किनिसकेँ होला,' उनी भन्छन्　। क्यामेराको यही ब्रान्ड राम्रो भन्ने लाग्दैन, उनलाई　। 'राम्रो फोटोका लागि क्यामेरा पनि महँगो हुनुपर्छ भन्ने होइन　। आफूलाई जुन क्यामेरा सजिलो लाग्छ, त्यही बेस्ट ब्रान्ड हो,' उनी भन्छन्　। उनले धेरै फोटो खिचिसकेका छन्　। 'सन् २००२ सम्ममा नेगेटिभ गन्दा ६ लाख नाघेको थियो,' उनी भन्छन्　।
पहिले-पहिले फोटोग्राफरको जिन्दगी भरिया र सुकुम्बासीको जस्तो थियो भन्छन्, उनी　। 'पैसाको अभावले कहिल्यै नछाड्ने, सधै केही न केही कमी भइराख्ने !' राजभाइ आफ्ना दुःखका वेला सम्झिन्छन्　। तर, संघर्षका दिनमा उनले श्रीमतीबाट पर्याप्त भरोसा पाए　। 'पैसाको अभावका कारण मैले झन्डै फोटोग्राफी नै छाडिदिएको थिएँ,' उनी भन्छन्, 'तर, त्यसवेला मेरी श्रीमतीले मलाई आर्थिक रूपमा धेरै भरथेग गरिन्　। मेरो आजको सफलतामा उनको ठूलो योगदान छ　।'
अहिलेचाहिँ फोटोग्राफरको जिन्दगी कसको जस्तो छ नि ? 'कमाइका हिसाबले अहिले धेरै राम्रो भएको छ,' उनी भन्छन्　।
कारणवश उनले आफ्नो पहिलो क्यामेरा बेचे तर, पछि उनलाई असाध्यै ननिको लाग्यो　। आठ वर्षपछि उनले त्यही क्यामेरा किने　। 'पहिलो क्यामेरा फोटोग्राफरका लागि असाध्यै पि्रय हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'मैले दुई हजार रुपैयाँ जति बजार मूल्य भएको आफ्नो पहिलो क्यामेरालाई १८ हजार तिरेर किनेँ　। मलाई पहिलो क्यामेराको यति माया छ कि मसँग भएका सबै क्यामेरा चोरी भए पनि म दुःखी हुनेछैन, तर पहिलो क्यामेरा चोरी भयो भने अत्यन्तै दुःखी हुनेछु　।'
उनलाई आफूले खिचेका फोटोमा सबभन्दा राम्रो लागेको रोटरी क्लबले बनाएको अपांग मैत्री विज्ञापनको हो　। यसमा राजेश हमाल प्रमुख मोडेल छन्　। 'यसमा मैले राजेश हमालले दिएको फिलदेखि सबै मुभमेन्ट क्याप्चर गरेको छु,' उनी भन्छन्　।
उनी वेला-वेला काठमाडौंका स्टुडियो फोटोग्राफरलाई उच्च कोटिको प्रशिक्षण दिने गर्छन्　। 'अबको पाँच वर्षमा काठमाडौंका फोटो स्टुडियोलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने इच्छा छ मेरो,' उनले आफ्नो इच्छा व्यक्त गरे　। तर, एउटा साँघुरो कोठा भाडामा लिएर सानो कम्प्याट क्यामेरा र दुईवटा लाइटका भरमा स्टुडियो चलाउने अहिलेको प्रचलनमा उनको इच्छा कम्ती चुनौतीपूर्ण लाग्दैन　।
ग्ल्यामर फोटोग्राफर बन्न चाहनेलाई उनको सुझाब छ, 'यो राम्रो पेसा हो　। यसमा आम्दानी पनि आकर्षक छ　। तर, यस पेसामा छिर्दा मनमा खोट लिएर नआउनुहोला　। ग्ल्यामर मोजमस्तीको क्षेत्र होइन　। यो कला र समर्पणको क्षेत्र हो　।'
राजभाइ सुवालका नजरमा फोटोजेनिक
सदीक्षा श्रेष्ठ (मिस नेपाल)
शब्द/तस्बिरः श्रीधर पौडेल